India: Heloka ve ny fampitàna mailaka? · Global Voices teny Malagasy
India: Heloka ve ny fampitàna mailaka?
Voadika ny 06 Desambra 2010 13:24 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, македонски, বাংলা, English
Niteraka fifanoherana ny lalànan'i India momba ny aterineto, noho ny fanararaotana amin'ny fampiasàna azy. Nosamborina i Moithu (47), mpiasan'ny governemanta ao amin'ny fitondràna Indiana Kerala, noho ny nampitàny mailaka vazivazy tany amin'ny namana vitsivitsy, momba ny tsifahombiazan'ny Antoko CPM (Communist Party-Marxist) tamin'ny fifidianana. Tamin'ny fifidianana farany tany amin'ny fanjakàn'i Kerala, ny nifanohitra amin'ny zavatra nandrasany no azon'ny governemanta kaominista eo amin'ny fahefàna.
Manome vaovao i SimyNazareth :
Tany Kerala, nosamborina ny (Mr. Moithu) olom-pirenena iray toy ny rehetra noho ny nampitàny emailaka nisy sary. Hita teo amin'izany ny sarin'ny mpanao politika malaza iray (Mr. Pinarayi Vijayan) niaraka tamin'ny resaka avy ao anaty sarimihetsika antitra Malayalam iray: ‘Sandesham’. Ny lazaina hoe heloka nataony dia ny hoe amboarin'i Moithu ny tapany nisy ny hoe “vazivazy ity” eo amin'ny lohateny (objet), ary nampitapita izany sary izany tamin'ny namany tamin'ny alalan'ny mailaka.
Taorian'ny fitoriana nataon’ Atoa. Pinarayi Vijayan, sekreteran'ny Antoko CPM (Communist Party-Marxist) eo amin'ny fitondràna, mailaka ny manampahefàna nihetsika, ary nisambotra an'Atoa. Moithu. Nalaina ny “disque dur”-n'ny solosainy. Navotsotra izy rehfa nandoa antoka, nefa mbola mitohy ny momba ny raharahany hatramin'izao satria tsy mbola nisy vaovao nilaza fa nofoanana ny fitoriana.
“Inona no ratsy nataoko? ny hany nataoko dia ny nampita mailaka mampihomehy izay tonga tao amin'ny fandraisan-kafatro”, hoy Atoa. Moithu manohitra. Toa tsy gaga ny antoko eo amin'ny fitondràna. Maro ny ao amin'ny antoko no miombon-kevitra fa tsy tokony horaisina ho vazivazy izao, fa tokony horaisina ho fampielezana tsaho.
Moithu, mponina any Kuttipuram any amin'ny Distrikan'ny Malappuram, dia naharay ilay mailaka avy tamin'i Hamsa, havana any Barcelona, izay naharay izany avy tamin'ny just4ajoke@ gmail.com. Helohin'ny andininy 66(A) ao amin'ny lalàna mifehy ny Aterineto nahitsy tamin'ny 2008, izay manasazy ny fandefasana “mailaka mpanely tsaho” i Moithu (fidirana am-ponja hatramin'ny telo taona sy onitra 100000 INR).
Ignorantia Juris Non Excusat nefa dia momba ny fanapahan-kevitry ny misahana ny aterineto, ary milaza fa adidin'i Moithu ny nanamarina ny zava-misy mialoha ny nandefasana ny mailaka.
Maneho hevitra i Kaippally :
Ny fanafenana ny tsikera dia mampiseho ny tsy fahampian'ny fahatokisana amin'ny “leadership” (fahaiza-mitarika). Fanoroana ny mety hahalasa ny firenentsika izany raha tavela anatin'ny haitraitra sy ny revirevin'ny fahaiza-mitarika kaominista tamin'ny taon-jato faha-19.
Manampy i SimyNazareth :
Ny ratsy amin'ity hetsika ara-dalàna ity dia mampatahotra ny mpampiasa aterineto tsy hampita mailaka vazivazy intsony izany. Ny fanapahan-kevitra toy izao dia mahatonga ny olona hatahotra hitsikera ny mpanao politika. Araka ny fanovàna ny lalànan'ny aterineto Indiana (2008), azo enjehina ara-dalàna ny zava-drehetra miteraka fanafitohinana na manelingelina ny hafa. Nampiharina tamin'ny tranga voalaza etsy ambony izany lalàna izany. Mety ho lasa lavitra ny vokatry ny fampiasàna izany lalàna izany ho an'ny fanapan-kevitra ara-dalàna avy amina mpanao politika mpitondra. Ny azo antenaina fosiny dia hoe tsy maka tahaka ny maodeliny ireo mpanao politika hafa, ka tsy hampiasa izany lalàna izany ho fitaovana hanafoanana ny tsikera sy ny fanoherana azy ireo amin'ny aterineto.